Apple waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala kulanto isku dhafka MagSafe ee iPad Pro | IPhone News
Apple waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala kulmaan ku-daridda MagSafe iPad Pro
Angel Gonzalez | | iPad Pro, Noticias
Wararka xanta ah waxay bilaabaan inay si joogto ah u tilmaamaan xaqiijinta dhacdada Apple ee ku taal qeybtii hore ee 2022. Way caddahay inay jiraan badeecooyin badan oo Apple-ka Weyn uu gacanta ku hayo. Si kastaba ha noqotee, waa inaad caqli badan tahay oo aad ogaataa goorta la bilaabayo iyaga iyo, dhammaan ka sarreeya, marka wax soo saarkooda iyo naqshadooda si fiican loo hagaajiyo. Mid ka mid ah alaabooyinka suurtagalka ah ee dhacdadan mala-awaalka ah waa a iPad Pro cusub. Sida laga soo xigtay xanta iPad-kan cusub Waxay la imaan doontaa taageero lagu dallaco MagSafe. Si kastaba ha ahaatee, Apple waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala kulmaan agabyada lagama maarmaanka ah dallacaadda wireless-ka.
Jilicsanaanta ama shaqeynta: dhibaatooyinka ay MagSafe u keeni karto iPad Pro
Heerka Apple MagSafe Waa nidaamka dallacaadda wireless-ka ee dib loogu soo celiyay iPhone 12 iyo 13 dhammaan noocyadeeda. Nidaamkani wuxuu u baahan yahay birlab iyo gariiradaha dallacaadda wireless-ka oo lagu dhex daray naqshadda aaladaha. Tani waxay kuu ogolaaneysaa Ku dallaci batteriga si fiilo-la'aan ah iyada oo loo marayo dajiyeyaasha gaarka ah oo leh kharash gaaraya 15W. Intaa waxaa dheer, Apple waxay abuurtay badeecooyin kala duwan oo karti u leh MagSafe sida kiisaska iPhone oo aan carqaladayn ku dallacaadda wireless-ka.
Es suurtagal ah in ay iPad Pro cusub wuxuu arkay iftiinka dhacdada ugu horeysa ee 2022. Dhab ahaantii, laga bilaabo Apple waxay rabaan soo bandhig nidaamka MagSafe iPads, iyo iPad Pro-kan ayaa noqon kara aaladda ugu habboon ee lagu soo bandhigo habka. Si kastaba ha ahaatee Apple dhibaato ayaa haysata. Sharaxaadku waa mid fudud. MagSafe waxay u baahan tahay muraayad si ay koronto ugu qabato gariiradaha ku dallaca wireless-ka. Marka laga hadlayo iPhone-ka, dhabarku maaha mid sidaas u weyn oo cadadka muraayaddu maaha mid sarreeya.
Apple waxaa laga yaabaa inay ku shaqeyso 15-inch OLED iPad Pro
Marka laga hadlayo iPad Pro, gadaalku aad buu u weyn yahay, shuruudaha galaaskuna aad buu u weynaan lahaa. Dhibaatada ugu weyn waxay ku jirtaa jilicsanaanta muraayadda dhabarka ee iPad Pro. Tani waxay ku tuuri kartaa dheelitirka injineerada Apple. Laakiin waxaa jira beddel kale oo ay horeba ugu tijaabinayeen xafiisyada Cupertino. Sida muuqata prototypes cusub Waxay kordhiyeen cabbirka astaanta tufaaxa ee dhabarka. Sidoo kale, tufaaxa wuxuu noqon lahaa galaas.
Muraayadda oo ay weheliso korodhka cabbirka calaamadda waxay ku filnaan kartaa soo bandhigista gariiradaha dallacaadda wireless-ka iskana ilaali inaad geliso xaddi badan oo galaas ah dhabarka. Taasi waa, ku dallacaadda wireless-ka ee MagSafe waxay diiradda saari doontaa oo keliya summada dhexe ee Apple ee dhabarka iPad Pro.
Si kastaba ha ahaatee, wax walba waa malo iyo xog aan maanta la xaqiijin karin. Waxa cad waa taas Apple waxay rabtaa inay sare u qaaddo wax soo saarka iPadka. Iyo laga yaabee, kuwa ka socda Cupertino, tani waxay ku dhacdaa iyada oo la soo bandhigayo dallacaadda wireless-ka taasoo u oggolaanaysa abuurista tiro badan oo qalab dheeri ah oo isticmaaluhu iibsan karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala kulmaan ku-daridda MagSafe iPad Pro
UGREEN HiTune X6: buuqa baabi'inta iyo dhawaaq wanaagsan wax ka yar €60
Sida loo wadaago WiFi ka iPhone